Vaovao - Vaovao tsara! Nampiasaina tamim-pahombiazana ny famatrarana tariby laharana faha-3 an'ny orinasa!
Tamin'ny 30 aprily 2018, rehefa vita ny debugging nandritra ny volana maro, dia napetraka tamim-pahombiazana ny mechine tariby laharana faha-3 an'ny orinasa, ary ny filohan'ny orinasa hafa dia nandray anjara tamin'ny famokarana ilay harato tariby voalohany.
Ny fitaovana dia azo ampiasaina amin'ny fantsom-boaloboka avo lenta amin'ny fantsom-by vy milomano, bara vy milomano mangatsiaka ary bara vy mangatsiaka boribory, miaraka amin'ny vokatra lehibe, avo lenta, fanovana mety, ambany tahan'ny tsy fahombiazan'ny herinaratra -mandrika sy avo lenta. Ny fitaovana dia fehezin'ny solosaina azo ampiasaina PLC. Ny sakany sy ny elanelan'ny harato vy dia azo ahitsy arakaraka ny filàna. Ny harato misy elanelana misy elanelana samy hafa dia azo soloina mandeha ho azy. Miaraka amin'ny efijery fanaraha-maso karazana mikasika, ny toetoetran'ny fitaovana dia azo arahi-maso amin'ny fotoana tena izy amin'ny alàlan'ny efijery mba hahazoana antoka fa mendrika ny vokatra.
Hatramin'ny nanombohan'ity taona ity dia nifandimby ny baiko avy amin'ny mpanjifa lehibe. Ny famokarana No.3 tariby mechine dia hampitombo be ny fahaizan'ny orinasa mpamokatra, hanome fanohanana matanjaka hamaly ny fangatahan'ny mpanjifa sy hanatsara ny taham-potoana amin'ny fandefasana baiko, ary hanampy amin'ny fampandrosoana haingana ireo orinasa.
Ny orinasa dia nanampy andalana famokarana mandeha ho azy roa tanteraka tao anatin'ny roa taona, ary nitombo be ny fivoahan'ny harato vy vy. Nahazo fanamarinana ACRS Aostraliana ny orinasa nandritra ny efa-taona. Ny isan'ny kaomandy anatiny sy any ivelany koa dia mitombo isan-taona. Ho an'ny fampandrosoana ho avy, ny orinasanay koa dia mikasa ny hanampy fitaovana bebe kokoa amin'ny ho avy hamaly ny filan'ny mpanjifa ao an-trano sy any ivelany.